मेरा अग्रजप्रति हार्दिक श्रद्धा–सुमन ! | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मेरा अग्रजप्रति हार्दिक श्रद्धा–सुमन !
२०७५ असार १७, आईतवार १२:५७ गते
धर्के हाफ बाहुला भएको सर्ट लगाएको, मोटोघाटो ह्यान्डसम पुरूष हाकिमचोकको एउटा चियापसलमा एउटा हातमा चुरोट र अर्को हातले चियाको गिलास समाउँदै आनन्दसँग एकटकले सोचिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । यो पंक्तिकार पनि ठीक त्यसैबेला चियाको तलतल मेटाउन त्यस पसलमा पुग्यो र अर्डर गरी हाल्यो, एक कप चिया बनाउनोस् त भन्दै ।
मैले सेतो रंगको पातलो लामबाहुले सर्ट लगाएको थिएँ । सर्टको अगाडिपट्टिको खल्तीमा मेरो आईडी कार्ड थियो । सायद, पातलो सर्टका कारण त्यो आईडी कार्डमा भएका अक्षरहरु छर्लङ्ग बाहिर देखिएका थिए । अझै त्यसमा डट्पेनले च्याप्दा त झन् प्रस्टसँग नदेखिने कुरै भएन ।
त्यो भद्र पुरूषका आँखा मेरो पातलो सर्टको पकेटभित्र परेछन् सायद् ! उनी म बसेको टेबुलनजिक आए । एकोहोरो मलाई हेरिरहे । मैले चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा उनले अति रोमान्टिक पाराबाट प्रश्नको झटारो हान्न सुरू गरिहाले । मैले विचार गरेँ कि यो मान्छे पक्कै पनि एउटा कूटनीतिक नियोगको कर्मचारी हुनुपर्छ या कुनै मानवअधिकारवादी या कुनै कुशल पत्रकार । यो चानचुने मान्छे पक्कै पनि होइन भन्ने लाग्यो । मैले यति सोच्दा नसोच्दै उताबाट केही प्रश्नहरु मप्रति ओइरिन थालिहाले ।
–तपाईंको नाम के हो ?
–मेरो नाम मोहन पोखरेल
–के गर्नुहुन्छ ?
–कहाँबाट गर्नुहुन्छ ?
–कुन पत्रिका ?
–सम्पादक कि रिपोर्टर
–तपाईंको सम्पादक ?
–मोहनजी ! म पनि पत्रकार, राससमा पत्रकारिता गर्दैछु । मेरो कार्यक्षेत्र पनि बुटवल ।
म अवाक् भएँ । म भर्खर ०४८ साल चैतबाट उक्त दैनिकमा कार्यरत थिएँ । नेपाली कांग्रेसको मुखपत्रका रुपमा उक्त पत्रिका छापिन्थ्यो । स्याङ्जाका कांग्रेसी नेता गोपालमान श्रेष्ठको सिफारिसमा मलाई त्यस पत्रिकामा नियुक्ति गरिएको थियो ।
चियागफसँगसँगै हामी दुवैका बीचमा पत्रकारिताका विषयमा पनि कुराकानी चलिरहेको थियो । पत्रकार धर्मराज अर्याल भन्ने थाहा पाएपछि मैले उनीसँग केही बुझ्ने कोसिस पनि गरेँ । किनकि, म आधिकारिकरुपमा ०४८ साल चैतदेखि नै पत्रकारितामा आबद्ध थिएँ । छिटपुट रुपमा काठमाडौँबाट प्रकाशित केही साप्ताहिक पत्रिकाको रिपोर्टरमा ०३७ सालदेखि नै आबद्ध थिएँ । यिनै कुराहरुको बेलिविस्तार मैले धर्म सरसमक्ष पोख्दै गएँ । यो भेट ०४९ वैशाख महिनाको थियो । म कामविशेषले बुटवलबाट चितवन आएको थिएँ ।
त्यो विलक्षण प्रतिभाको धनी, मिलनसार, भावुक प्रकृतिको व्यक्ति, पत्रकार धर्मराज अर्याल जो एउटा कवि र साहित्यकार पनि हो, त्यस्तो प्रतिभासँग चिनाजानी हुनु र पत्रकारिताको विषयमा थप ज्ञान हासिल गर्नु मेरो लागि शौभाग्य नै थियो । कुरैकुरामा धर्म सरसँग निज्ञासा राखेँ– सर, चितवनबाट एउटा पत्रिका दर्ता गरेर चलाउनुस् न । यहाँबाट पत्रकारिता गर्न रहर भएका युवाहरुका लागि अति राम्रो हुनेथियो ।
–तपाईंले कुरा राम्रो राख्नुभयो, मैले प्रोसेस थालिसकेको छु, सायद पत्रिकाको नाम चितवन पोष्ट नै रहन्छ होला ।
यिनै जिज्ञासाका साथ मैले धर्म सरलाई धन्यवाद दिँदै फेरि चितवन आउने वाचाका साथ म बुटवलतर्फ लागेँ ।
पछि बुटवलबाट चितवन आउँदा धर्म सरले चितवन पोष्ट दैनिक चलाएको थाहा पाएँ । ०५४ साल पुस ९ बाट पत्रिका प्रकाशनमा आएको रहेछ । सरसँग चिया मार्केटमा पुनः भेट भयो । धर्म सरले बुटवल भन्दा चितवनमा नै बसेर पत्रकारिता गर्न सुझाव दिँदा मेरो मन आनन्दले प्रफुल्ल भयो । सायद, चितवन पोष्टमा मलाई आबद्ध गराउन उहाँले निकै कोसिस गर्नुभएको थियो । त्यही समयमा विष्णु छिमेकी, अर्जुनप्रसाद शर्माले पारदर्शी साप्ताहिक प्रकाशित गर्नुहुन्थ्यो । विष्णुजी र अर्जुनजीको आग्रहलाई अनुसरण गर्दै म बुटवल छाडेर चितवन आएँ र पारदर्शी साप्ताहिकमा आबद्ध भएँ ।
धर्म सर र हामीहरु एकआपसमै रमाएका थियौँ । पारदर्शी र चितवन पोष्टको अफिस आमने–सामने थियो । मसँग धर्म सरले मेरा सुखदुःखबारे सधैँ जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो ।
समय बित्दै गए । चोला फेरिँदै गयो । हामीहरुबीचको संवाद पनि बाक्लिँदै गयो । प्रेसमार्गमा चितवन पोष्ट दैनिकको अफिस बसेपछि पनि म प्रायःजसो उक्त अफिसमा जान्थेँ । धर्म सरसँग कुराकानी हुँदा आनन्द आउँथ्यो । आगन्तुकहरुलाई चिया ख्वाएर पठाउने उहाँको अद्भुत स्वभाव थियो । आफूभन्दा सानोलाई पनि आदर गर्नुहुन्थ्यो, मायाममता राख्नुहुन्थ्यो । दुर्भाग्य ! परिवर्तनशील संसारको गति विचित्रको हुँदोरहेछ । परमेश्वरले हाँस्नेलाई रूवाउँदा रहेछन् ।
उहाँले हामी सबै सञ्चारकर्मीलाई अनाथ बनाएर जानुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखा उहाँको निधनमा स्तब्ध भएको छ । हामी शोकविह्वल छौँ, सबै सञ्चारकर्मीहरु । दुःखको यस घडीमा धैर्य भई पत्रकारितालाई साहसका साथ अगाडि बढाउनुबाहेक हामीमा अरु विकल्प छैन ।
दुःखको यस घडीमा पनि चितवन पोष्टमा धैर्यता र साहसका साथ पत्रकारिता गर्ने पत्रकार साथीहरुलाई श्री परमेश्वरले सदा स्नेहका रुपमा हेरुन् र स्व. पत्रकार धर्मराज अर्यालको मृतात्मालाई चिरशान्ति मिलोस् र वैकुण्ठवास होस् भन्दै एउटा पत्रकारका तर्फबाट श्रद्धा–सुमन अर्पण गर्दछु !